Baruur keliya baa baruuro qurmisa. One scabbed sheep infects the whole flock.by By Jamal hargeysaawi
Monday November 26, 2018 - 08:39:53 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Hadaynaan xumaantiyo dilkiyo daynin kala qaadka.Dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda Ilaahe.Danbarkeedu waa Jahannama iyo dogobkii naaree.Dugsi ma leh qabyaaladi waxay dumiso mooyaane.
Somalidu waxay ku maahmaahdaa iney Talo iskuma kaa sheegto.You cannot trust the chance.تجريالرياحبماتشتهيالسفن.by Ahmed Jama
Saylacey ayaan daran waxaa isasoo taraaya in badhasaabka qarsoon ee Salal uu yahay isku duwaha caafimaadka degmada saylac inuu yahay Mr.yussuf cawaale Daahir.
Ninkaa aan kor ku soo xusney oo noqdey fitnada degmada saylac lagana cabsi qabo in dagaal reereysani ka dhaco gobolka Salal.
Badhasaabka gobolka Salal oo si buuxda uga amarqaata isku duwaha degmada saylac yuusuf cawaale Daahir taasina imika ay keentey in dadkii degaanku ay aad uga gadoodsanyihiin wax yaalaha uu ku dhaqmeeyo badhasaabku.
Hadaba maxaa keeney badhasaabka gobolka Salal inuu maqlo oo qudha kayar ee isku duwaha caafimaadka gobolka Salal ka,ah?su,aashaasi waxay noqotey mid ka yaabisay bulshada reer Salal oo u aragta badhasaabka inuu dheq qudha leeyahay dhegtaasina uu ku maqlo yarkaa isku duwaha caafimaadka degmada saylac ah.
Wararka naga soo gaadhaaya magaalooyinka saylac,boon,xariirad, cabdiqaadir iyo Garbo-dadar ayaa waxay sheegayaan in dadkaadsi ay ku kacsanyihiin waxa uu sameynaayo badhasaabka gobolka Salal Mr.mawliid.
Mudane wasiir wax yaalaha lagu arkey waxaa kamid ah kala sooca uu ka wado gobolka salal isagoo ka keeney itoobiya dad ay isku qabiilyihiin oo layidhaahdo barbaarta dhalinta beesha uu yahay ku waasoo laga keeney dire dawa,iyadoo dadkii degaanka ahaa ay shaqo la,aan yihiin hadaba wasiir ninkaasi waxa uu meesha ka wadaa waa ka waaweyn ee arintaa intaaney wax dhicin u yeelo fiiro gaar ah.
Waxaan ogaysiinaynaa wasiirka caafimaadka arimaha aan kor kusoo sheegey oo ah qabyaalada qaawan ee uu kula kacay shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Salal taaso keeni karta xaslilooni Daro Sidaa darteed waxaa doonaynaa in wasaarada caafimaadku Fira gaara u yeelato arimahan ka socda gobolka ee kor ku xusan